Penza agrarians inogamuchira anopfuura mamirioni mazana masere emamarubhi ekutora kwepasi
Muna 2020, Penza varimi vekurima vachawana 181,2 miriyoni rubles yekumisikidza nzira dzekudzorerazve nzvimbo dzenyika dzekurima.
Zvinoenderana nechibvumirano chakaitika pakati pehurumende yedunhu rePenza nebazi rezvekurima reRussia, dunhu iri richapihwa zviuru gumi nemazana matanhatu nezvinomwe zvemazana emadhora emari yemubatanidzwa kuita zviitiko mumunda wekudzokorodza minda. Pakazara, 166,7 miriyoni rubles achagoverwa kuyerwa, yekudiridza uye tsika uye hunyanzvi matanho, achifunga nezvemari kubva kubhajeti yenyika.
Mbatatisi inokura mudunhu rePenza
Sekutaura kwamutevedzeri weGurukota rezvekurima, Olga Gatagova, tsigiro yenyika kudunhu rekudzoreredza ivhu zvichaita kuti vashandi vezvekurima vadzikise mitengo yezvigadzirwa zvekurima, kuchengetedza basa, uye kuve nechokwadi chekuitwa kweChikafu Chengetedza Dzidziso yeRussia Federation.
Source: Ministry of Agriculture yePenza Dunhu
Tags: kudzikisirwa pasiPenza regionkudiridza subsidies
US Potato Indasitiri Inowana Ruzivo rwemadhora makumi mashanu emamiriyoni
Vanhu vekuRussia vanochinjira kuchikafu chakachipa
Runyorwa rwekunyora "Pakubvumidzwa kwenzira uye mazwi ekuyera kusiana, kufanana uye kugadzikana kwesarudzo yekuwana" hurukuro